Madaxwaynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo caro darteed uga soo tagay Duugtii allaha u naxariistee Feeryahan Mohammed Ali…(Maxaa laga bi’iyay?) – Gool FM
Madaxwaynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo caro darteed uga soo tagay Duugtii allaha u naxariistee Feeryahan Mohammed Ali…(Maxaa laga bi’iyay?)
(America) 10 Juunyo 2016. Duug ballaaran ayaa maanta oo Jimce ah Allaha u naxariistee Mohammed Ali looga sameeyay Louisville, Kentucky halkaa oo ay soo xaadireen kummanaan dad oo ay qeyb ka ahaayeen dad waa wayn oo magac ku leh dunida.
Dadkii maanta qaaday naxashkii Mohamed Ali waxaa ka mid ahaa feeryahannada Mike Tyson iyo Lennox Lewis iyo waliba aktarka caanka ah ee Will Smith.
Sikastaba, aaska qaran ee maanta waxaa caro darteed uga maqnaa madaxwaynaha dalka Turkiga ee Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dib ugu duulay dalkiisa Turkiga kana tagay halka ay duugta ka dhaceysay ee Mareykanka.
Erdogan ayaa shalay qeyb ka ahaa duugtii waafaqsaneyd mida Diinta Islaamka ee shalay loo sameeyay Mohammed Ali isagoona wax kaga dukaday balse dib ugu soo duulay isla shalay dabayaaqadii dalkiisa Turkiga.
Waxyaaba ka careysiiyay madaxwayne Erdogan ayaa lagu sheegay inay ahayd inay hadal ka soo jeediyaan isaga iyo boqor Abdallah ee dalka Jordan duugta Mohammed Ali sida la qorsheeyayba balse markii dambe dadka abaabulka hayay ay liiska ka saareen sabab ay ku sheegeen inuu waqtiga yar-yahay.
Intaas oo kaliya sheekada kuma ekee waxaa kaloo ka carreysiyay madaxwaynaha Turkiga sida ay wararku sheegayaan in loo diiday inuu naxashka Marxuumka saaro dhar laga keenay Kacbada.
Waxaa kaloo la sheegay in Erdogan laga diiday codsigiisa kale ee ahaa inuu meesha duugta uu QURAAN ka aqriyo Mehmet Gormez ee ah wasiirka arrimaha diinta ee dalka Turkiga.
Madaxwayne Erdogan iyo wasiirka arriimaha Diinta ee Mehmet Gormez
“Sheekadu ma ahan dadka ay yihiin iyaga, arrinka ayaa ah inaan meel bannaan uga heynin iyaga Barnaamijka.”. waxaa sidaa yiri qof u hadlayay qoyska Mohamed Alli oo lagu magacaabo Bob Gunnell.
Arrinku intaa oo kaliya kuma eka oo waxaa kaloo la soo warinayaa inay xitaa waqti kooban isku dheceen ilaalada madaxwayne Ordogan iyo kuwa sirdoonka Mareykanka intii uu madaxwaynuhu joogay Louisville.
GOOGOOSKA: France vs Romania 2-1 (Faransiiska oo guul ku furtay Euro 2016)